mushaTURKEYTurkish Black Sea Coast52 ArmyÇambaşı Ski Center Kugadzirira Mwaka
Çambaşı Ski Center Kugadzirira Mwaka
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 52 Army, GENERAL, Turkish Black Sea Coast, TURKEY, TELPHER 0
cambasi ski resort iri kugadzirira mwaka
Turkey zvaJehovha Çambaşı kunoshamisa musiyano yokuva pedyo negungwa kugadzirira the mwaka Ski 2019-2020.
Çambaşı Ski Center iri panzvimbo ye2000 acres panzvimbo yakakwirira ye650 naOrdu Metropolitan Municipality uye iri panzvimbo ye52 km kubva pakati peguta; China Season Çambaşı Hotel, Slalom Café Restaurant, Zirve Café, snack chikafu buffets, ski uye toboggan makamuri zvakagadzirirwa iyo nguva yechando.
Mu Çambaşı Natural Institution, inova ndiyo inodikanwa yevanoda ski mudunhu, kuiswa kwenzvimbo nyowani, kufambiswa kwemawere, kuchengetedzwa kwemachoto, kurongeka kwenzvimbo yekusangana, kugadzirisa kwemvura yemukati uye zvimwe zviitiko zvakawanda zvinoitwa.
Mumwaka wapfuura, zviitiko zvevanogadzira siki pamwe nemazano emwaka mutsva zvinorongwa kuunzwa mwaka wekuvhuvhuta. Çambaşı Ski Center, inoshandira vagari venzvimbo, vepanyika uye vekunze, vachatorawo makwikwi anozoitirwa panharaunda yenyika.
Skiers 2019-2020 ski mwaka ichava nemwaka unonakidza nemakiti matsva uye zvivakwa zvezuva nezuva zvezuva nezuva.
Cıbıltepe Ski Centre Inogadzirira Kuenda 15 / 09 / 2016 Cibiltepe Ski, Skiing Season kuti Kugadzirira: Cibiltepe Ski Center muruwa Kars Sarikamis pakati rinokosha yechando ushanyi nzvimbo kweTurkey, kugadzirira the mwaka. Sarikamish Meya zvaanorumbidza ari the uyai Göksal Toksoy, akati mashoko kune venhau, akati nokukurumidza mberi basa. Erzurum kubva kurutivi rumwe ", Erzincan uye Kars Winter Tourism Corridor" chirongwa, pombi dzinotakura tsvina, ari muteresi mutsetse, tsvina mvura kurapwa Zvivako, mabhizimisi centre, mitambo chando nharaunda, basa rokugadzira chivanze zvaitwa, Toksoy achitaura Ukuwo overhauled ari the nzira " Sarikamish, vose mamiriro uye private kwemauto mari mukati makore maviri ...
Bayraktepe Ski Centre Kugadzirira Zuva Renguva 18 / 11 / 2013 Kugadzirira Winter Ski Season Bayraktepe: Bayraktepe navatariri Sarıkamış Ski Center, iri rimwe Turkey kuti guru state plesieroorde, vakatanga kugadzirira chando mwaka. MuBraraktepe Ski Center, inozivikanwa sechando checristal, pakati pemasango emapine pine, basa mumagetsi uye munzvimbo dzinomhanya dzichikurumidza. Gavhuna Muhammad Gurbuz, mutauriri weAA, akadaro muchitinho chiri mberi kwemwaka wechando chisati chaitwa kugadziriswa kwemigwagwa uye magetsi zvivako nekugadzirira, akadaro. Sarikamish uye mari akaita tichitarisa yechando toerisme pamwe pakuvaka Gurbuz kutaura paizova kupenya nyeredzi Turkey kuti, "Winter akapoteredza regadziriro basa uye muna 8 9 runway zvekupfakira nokuputsa mabasa ...
Sarıkamış Ski Center Kugadzirira Mwaka weChando 18 / 09 / 2019 Mubati Kars Turkey kuti Nherera, iyo rava kupenya nyeredzi muTurkey kuti yechando Tourism uye 2019-2020 kuferefeta vakawana Sarıkamış Ski Center aigadzirira yechando mwaka. Gavhuna kweTurkey kuti Nherera, kutanga sezvo kuvakwa mberi uye Turkey Sarıkamış chete Ski Center izvo zvichashandiswa mubasa iri namahwindo maitiro uye 6-seater pasofa pamwe maawa 3 vanhu zviuru anokwanisa kushandisa idzva the vachasimudza wemuTesitamende 2 makiromita pakureba, zvokuimba midziyo, kuvheneka uye 4 makiromita mu Kureba runway iyo itsva slalom runway yakaongororwa uye yakagamuchira ruzivo kubva kune zviremera nezve basa racho. Gavhuna akabva avaka Kütük Ev nenzvimbo dzekugara, dzekudya uye dzemukati ski.
Yildiz Mvura iri kugadzirira mutsva wegore 27 / 07 / 2015 Yıldız Mvura iri kugadzirira masikati emwaka gore: Kugadzirira kuri kuwedzera kuwedzera mitemo yemugwagwa uye unhu hweYıldız Mountain Winter Sports Tourism Center mumwaka mutsva. Maererano neshoko rakanyorwa rakagadzirwa neSivas Special Provincial Administration, General Secretary of Administration Salih Ayhan akaongorora mabasa mumugwagwa uye nechepakati pepakati uye akagamuchira ruzivo kubva kuzviremera. Ayhan, achitaura nezvemigwagwa yemabasa ekutungamira, akataura kuti mabasa eYıldız Mountain Winter Sports Tourism Center, ayo ari pakati pezvirongwa zvekukudzwa kwechirongwa, ari kuramba achiwedzera nzira yemugwagwa uye unhu. Moto Cermik nemugwagwa we82 pakati pekufambisa ndege uye nepakati kupa ruzivo pamusoro pemugwagwa Ayhan, mugwagwa wekugadzirwa kwemigwagwa merkez
Kugadzirira Erciyes Ski Season 14 / 11 / 2015 Erciyes Ski Season iri kugadzirira: Erciyes Ski Centre kutsvaga uye kuponesa maitiro kwakaitirwa kuitira kugadzirira nguva itsva. Tsvaga uye kuponesa maitiro kwakaitwa muEuroci Ski Ski kuitira kugadzirira nguva itsva. Kayseri Metropolitan Municipality Erciyes AS kutsvaga, kuchengetedza nekuchengetedza kwemigwagwa uye maGendarmerie Search and Rescue (JAK) mauto mumutambo unoitwa pamwe chete navatasviki ve8 vakaputirwa nemotokari, vakaponeswa kubudirira. Maererano nemamiriro acho ezvinhu, iyo nzira iyo 8 munhu aive nayo muStarcık Gate iyo yakamira pashure penguva nemhaka yekushayikwa kwekambani. Kusagadzikana kusakwanisa kushanda mazano makambani, vakauya panzvimbo yacho nokukurumidza sezvinobvira. Mapoka anobata kuchengetedza matanho kuburikidza nekuita basa rekusarudza basa,
Speed ​​Limit Yashandurwa muAntalya
Cylinder Yakatemerwa Konkriti Nzira yeKunyorera Yakatangwa muOrdu
Cıbıltepe Ski Centre Inogadzirira Kuenda
Bayraktepe Ski Centre Kugadzirira Zuva Renguva
Sarıkamış Ski Center Kugadzirira Mwaka weChando
Yildiz Mvura iri kugadzirira mutsva wegore
Kugadzirira Erciyes Ski Season
Yıldız Mvura iri kugadzirira iyo itsva season season
Salda Ski Center Yakagadzirira Winter Zuva
Palandoken ski resort kugadzirira nguva yacho
Ergan Mountain Ski Resort iri Kugadzirira Gore
Cıbıltepe Ski Centre iri kugadzirira nguva yacho
Nhau Archive Sarudza mwedzi October 2019 (297) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Range 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Range 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Range 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Range 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Range 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Range 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Range 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Range 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Range 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Range 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Range 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Range 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Range 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) October 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Range 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)